ပို့စ်တင်ချိန် - 12/20/2013 09:49:00 AM
ခြေစွယ်များ နီရဲ၊ ရောင်ရမ်း၊ နာကျင် လာတတ်သည်။ ခြေသည်း ညှပ်စဉ် ကျန်ခဲ့သော ခြေသည်း စွယ်က အသားထဲ တိုးဝင်ရာက ခြေစွယ် ၀န်းကျင်တွင်၊ ရောင်လာ တတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပြည်တည် လိုက်လာသည်။ ခြေသည်း ညှပ်ရာတွင် ခြေစွယ် ကျန်ခြင်းနှင့်၊ ရှုးဖိနပ် ကျပ်ကျပ် စီးသည့် အခါ၊ ခြေချောင်းဖျားများ စုညှစ် ခံထားရခြင်း တို့မှာ ခြေစွယ်ငုပ် စေသောအရင်းခံ အကြောင်းများ ဖြစ်ကြ ပါသည်။
ခြေစွယ်ပိုးဝင်၊ ရောင်ရမ်း နေလျှင် ထိုသို့ ဝေဒနာ ရနေသူတွင် ဆီးချို၊ သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ စသည်တို့ ရှိလျှင်။
ခြေစွယ်ငုပ်မှန်း စောစီးစွာ ခန်.မှန်း သတိထား မိပါက အောက်ပါတို.ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ခြေစွယ်ငုပ် ဝေဒနာပိုဆိုး မလာအောင် ဟန်.တား ပေးထား နိုင်သည်။
ခြေစွယ် ငုပ်နေသော ခြေထောက်ကို ရေနွေးထဲ ဆားရည် နွေးနှစ်ဇွန်း၊ သုံးဇွန်း ထည့်မွှေ ထားသော ဆားရည် နွေးဖြင့် တစ်ခါစိမ် ဆယ်မိနစ်ခန်.ကြာ တစ်နေ. နှစ်ကြိမ် ပုံမှန် စိမ်ပေးပါ။ နာနေ၊ ရောင်စ ပြုနေသော ပလာစတာ ကပ်ထားပါ။
အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နည်းမှာ ခြေထောက်ကို ဂရုစိုက် နည်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ နေ.စဉ် ခြေဆေးပါ။ ခြေဆေးပြီးနောက် ရေစင်အောင် သုတ်၊ ရေခြောက်အောင် ထားပါ။ ရှေ.ဘက်တွင် ခြေချောင်းလေး များကို စုညှစ် ထားတတ်သည့် ဖိနပ်၊ ဦးချွတ်၊ ဒေါက်မြင့်၊ ဖိနပ် စသည်တို. မစီးသင့်။ ချည်ထည် ခြေစွပ်၊ စကော့ကင် များကိုသာ ၀တ်ပါ။ နေ.စဉ် လဲပါ။ ခြေဦးပိုင်း ဖွင့်ထားသော ခြေစွပ်၊ စကော့ကင်များ ၀ယ်၍ ရသည်။ ယင်းအမျိုး အစားကို အသုံးပြုပါ။
(၁)ခြေသည်း မညှပ်မီ ခြေသည်းနူး၊ ပျော့သွား စေရန် ရေနွေး ဇလုံထဲတွင် ဆယ်မိနစ်ခန်. စိမ်ထားပါ။
(၂)တုံးသော ခြေသည်းညှပ်၊ ဓား၊ ကပ်ကြေးတို. မသုံးသင့်။ တစ်ခါ ညှပ်လျှင် တစ်ချက်တည်း ပြတ်မည့် ခြေသည်းပြတ်မည့် ခြေသည်းညှပ်ကို သုံးပါ။ ခြေသည်းကို ကွေး ၀ိုက် ညှပ်သွားပါ။ ထောင့်ဘက်များကို ဂရုစိုက် ညှပ်ပါ။ ထောင့်ဘက်ဖျား များကို တစဉ်း တိုက်ပါ။
(၃)ခြေစွယ် ကုပ်နေလျှင်၊ ခြေသည်းညှပ်၊ ဓား၊ ကပ်ကြေး စသည်တို.ကို ဇွတ်ထိုး မထည့်ရ။ ရေနွေး စိမ်ပြီးခြေသည်း နူးညံ့ နေချိန်မှာ ထိုခြေစွယ်ကို ညှပ်ပါ။ မာခေါက် ကွေးကုပ် နေသော ခြေစွယ်အောက်သို. မည်သည့် အရာမှ ထိုးမ သွင်းရ။
သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ ပိုမိုဖတ်ရှုရန် ===> health-news
ရွက်လှေ ရွှေတံဆိပ် ဆုရှင် ဖုန်းကျော်မိုးမြင့်နှင့် ...
ပြည်တွင်းရှိစားသောက်ကုန်များ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စစ်...
ကွမ်ကျို့အသင်းအား ၃ ဂိုး-ဂိုးမရှိဖြင့် အလွယ်တကူ အန...
စိတ်ဖိစီးမှုကို အမြန်လျှော့ ချနိုင်သော နည်းလမ်းများ...
အစာ မရှိသော အစာအိမ် အတွက် ရေသောက်ပေးပါ
အချစ်ဟော်မုန်းနှင့် အော်တစ်ဇင် ကလေးငယ်
သင့်မီးဖိုချောင်မှ မိတ်ကပ်ဖျက် ပစ္စည်းများ
ခရမ်းချဉ်သီး ဖျော်ရည်သုံး ဆောင်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေး...
လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ် - ဆောင်းကာလမှာ ဒုက္ခသည်ေ...
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်အေး ရေလုပ်ငန်း ဖွံဖြိုးတိုး...
Facebook သို့မဟုတ် မျက်နှာဖုံး စွပ်ပွဲတော်ထဲ ကျွံဝ...
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေကို အမ...
ကိုယ့်အပေါ် နားလည်ပြီး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ပါက အချစ်ဆို...
ဘီယွန်းဆေး၏ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဗီဒီယို Drunk In Love...
Bill Board ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး သီချင်းအပုဒ် ၁၀၀ ...
Myanmar Gazette မြန်မာ့ဂဇက် သတင်းစာ Vol.1, Issue.3...
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ...
မြန်မာအမျိုးသမီးဘော်လုံးပွဲ နိုင်ရန် သိန်း ၂၅၀၀ ရမ...
မြန်မာ - ၆ ၊ မလေး - ၀
Planet Evening News Sheet (19-Dec-2013)
Mizzima သတင်းစာ ၉၂၀-၁၂-၂၀၁၃)
Arts Magazine No.6, Issue-1, December 2013
ဂျပ်စတင်ဘီဘာ အဆိုတော်အဖြစ်က အနားယူမယ်
Sea Games က ပေးတဲ့ အတွေးစများ
လူ့အခွင့်အရေးသမားက ပေးတဲ့ သေဒဏ်
Premier Eleven Sport Journal (22-Dec-2013)
Focus Online ဖက်ရှင်ဂျာနယ် (၂၀-၁၂-၂၀၁၃)
အသံဝင်လျှင် သတိပြုပါ အသံအိုး ကင်ဆာ
(၈)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထ...
သမ္မတမဖြစ်ရေးပိတ်ပင်ထားသည့် အခြေခံဥပဒေပါအချက်များြ...
7 Day News Journal (18-Dec-2013)
ဦးခေါင်းကြီးရောဂါ ခံစားနေရသည့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ကလေး...
တရုတ်နိုင်ငံအလံ မီးရှို့ဆန္ဒပြသူတစ်ဦး ရဲစခန်းတွင် လ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား(၁၆)ဦး လာရာလမ်းအတိုင်း ပြန်လ...
အဖျက်အမှောင့်လုပ်ရန်အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ က ကြံစည်နေဟုဆို
New Light of Myanmar သတင်းစာ (၂၀-၁၂-၂၀၁၃)
ခင်ပွန်းဖြစ်သူက အလိုမတူဘဲ သားမယားပြုကျင့်ဟု လက်ထပ်...
ဥရောပ ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်ခုတွင် မြန်မာလူမျိုး ဘောလုံ...
အားမလျော့သေးတဲ့ မြန်မာ အမျိူးသမီး ဘောလုံးမယ်များ
ကျပ် ၁၀ သိန်းပမာဏအထိ မိုဘိုင်းဖုန်းအချင်းချင်းငွေ ...
အောက်တိုဘာအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဗုံးဖောက်ခွဲမှုမျာ...
အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်း ဆုငွေ သိန်း ၁၂၀၀ ကျော်ရရှိ
မြောက်နဲ့ တောင်ကိုးရီးယား တွေ့ဆုံ စကားပြောခဲ့ကြ
မိုးထိမိုးမိ ဆန္ဒပြသူတွေကို ရဲက ဖြိုခွင်း
KIA ရဲ့ တပ်သား စုဆောင်းခံရသူတွေ ပြန်လွတ်လာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချင်းပြည်ခရီးစဉ်အတွင်း လူထုတွေ့...
ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ်သား ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း နေရပ်ပြန...
ကင်ဆာ အတွက် အထောက်အကူ သင်္ဘောရွက်
အကြော် များများ စားရင် အသည်း အတွက် မကောင်း
သင့်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပုံက သင့်အကြောင်းကို ပြောပါတယ်
ထိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ပြုတ်ကျရေး ဆန္ဒပြပွဲ ပြန်စ
Bluetooth လို့ခေါ်ရခြင်း အကြောင်း
နာရီ ၃၀ လောက် မရပ်မနား စာရေးခဲ့သူ မိန်းကလေး ပင်ပန်...
သတိပြုဖွယ် အစာကြေဆေးသောက်သုံးမှုနှင့် ဗိုက်တာမင် ဘီ...
လူကုန်ကူးခံရသည့် ကလေးသူငယ် ၂၂၄ ဦး ကယ်တင်နိုင်
အမျိုးသမီး အကြို ဗိုလ်လုပွဲ ရှုံးနှိမ့်အပြီး အမျို...
ကွမ်းရွက်၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရ၍ ထိုင်းတွင် မြန်မာလုပ်သား...
ဒုစရိုက်များကင်းသော လူ့ဘောင်လောကကြီး ဖြစ်ဖို့
ဖုန်း ဘက်ထရီနှင့် ပက်သက်၍ သိထားရန်အချက်များ
ဝမ်းလျှောခြင်း အတွက် အရေးပေါ် အိမ်လုပ် ဓာတ်ဆားရည်
ရိုးရာ အစားအစာ စားခြင်းဖြင့် အဝမလွန်အောင် နေထိုင်ပ...
သတိ ကိုယ်ပျောက်လူသတ်သမား ဣတ္ထိယတို့အနားတွင်ရှိသည်
တစ်ခုပေးပြီးရင် တစ်ခုတော့ ပြန်ရလိမ့်မယ်
Planet Evening News Sheet (18-12-2013)
မိုးထိမိုးမိ ရွှေလုပ်သား ၅ ဦးကို ဆွေးနွေးရန် တာဝန်...
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချင်းလူထုနှင...
မြဝတီ နေ့စဉ်သတင်းစာ (၁၉-၁၂-၂၀၁၃)
Auto World Journal အတွဲ (၂)၊ အမှတ် (၂၈)
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၂) အမှတ်(၅၀)